Xog badan oo aad uga baahan tahay kulanka ugu adag wareegga 16-ka qaramada Yurub ee Talyaaniga iyo Spain – Gool FM
Xog badan oo aad uga baahan tahay kulanka ugu adag wareegga 16-ka qaramada Yurub ee Talyaaniga iyo Spain
Haaruun June 22, 2016
(Yurub) 23 Juunyo 2016 – Xulalka Talyaaniga iyo Spain ayaa isku beegmay wareegga 16-ka tartanka qaramada Yurub ee Euro 2016, kaddib markii uu xulka Talyaaniga guruubka E kaga soo baxay kaalinta koowaad, halka xulka Spain uu kaalinta labaad uga soo baxay guruubka D.
Kulanka labada xul ayaa ka bilaaban doona garoonka Paris’ Stade de France 27 bishan June marka ay saacadda geeska Afrika tahay 7:00 Fiidnimo.
Labadan xul ayaa kulmay 34 kulan, min 10 jeer ayey kala adkaadeen, halka 14 kalena ay barbaro galeen.
Kulankan ayaa ah final-kii Euro 2012 oo dib loo soo celiyey, iyadoo markaa uu xulka Spain 4-0 ku xaaqay xulka Talyaaniga, inkastoo ay barbaro 1-1 ku galeen wareegga guruubyada ee isla tartankaas.
Talyaaniga ayaa dhaliyey 40 gool marka la la barbaro dhigo xulka Spain oo dhaliyay 16 gool 34-kii kulan oo ay kulmeen labadan xul.
Marka laga saaro kulamada saaxiibtinnimada, xulka lagu naanayso Nazionale ayaa dhaliyey kaliya hal gool afartii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaareen Spain.
Haddii aynu eegno kaliya kulamada tartammada guushii ugu dambeysay ee xulka Talyaaniga waxay ahayd ciyaartii ay 2-1 uga adkaadeen Spain semi-final –kii koobkii Adduunka bishii July ee sanadkii 1994-kii.
Taas waxaa ku soo xigay barbarihii 0-0 ay galeen Spain ee Euro 2008, markaasoo rigoorooyin looga adkaaday Talyaaniga, waxaana sii xigay barbarihii 1-1 ee wareegga guruubyada tartankii Euro 2012, waxaana u sii xigay isla final-kii tartankaas oo Talyaaniga lagu cabay 4-0.
Sidoo kale waxay sanadkii 2013-kii labadan xul ku kulmeen Confederations Cup markaasoo ay galeen barbaro goolal la’aan 0-0, xulka Talyaaniga ayaana markale rigoorooyin looga adkaaday.
Miyuu Neymar ku sii jeedaa Manchester United?... (Ku xigeenka madaxa maaliyadda Barca oo hadlay)
Zlatan Ibrahimovic oo ka fariistay ciyaaraha caalami